Ukubukezwa Kwama-Motherboard MSI B250M MORTAR - Ukukhetha Okulondekile
Ukubuyekeza Kwama-Motherboard MSI B250M MORTAR
Micael Engrácia 2018-01-30T14:56:03+00:00
QUma sifuna ukukhuluma ngezinsimbi zekhwalithi ye-PC Gaming, amagama ambalwa avela. Futhi enye yazo ayilutho ngaphandle kwe-MSI engalingani.
I-MSI ilethe i-motherboard entsha emakethe, lebhodi le-motherboard lisefomethi ye-micro-atx.
Okuhle kunoma ngubani ofuna ukwakha i-PC Compact Gaming.
Iletha i-chipset ye-Intel B250 esekela isizukulwane sesikhombisa se-Intel Processors (Isekela i-Intel i7 Processors).
Iphinde isekele abaproseshi be-6 i-Skylake Generation, eminye yemisebenzi ingasekelwa kuphela kwisizukulwane sesishiyagalolunye.
Lapho sivula ibhokisi sithola i-motherboard enhle kakhulu ngemibala ekugqokeni kwebomvu neGrey Black.
Uma sidlala ku-Motherboard sizwa ukuqina kwayo okuhambisana nemikhakha yaseMelika (i-Military Class 5).
Lokhu Isikhathi MSI, lagxila ngokukhethekile izikhonkwane abalandeli, ngaleyo ndlela linikeze lula ukusetshenziswa kulabo abafuna ukugibela Cooler e Ibhokisi, sisekela 4 abalandeli abafuna ukuba baphathe lwaluyophola kuya ezingeni entsha.
Ungakhohlwa ukuthi i-motherboard inebaphathi bezakhi zokugcina ezizovumela impilo ende.
Siyajabula, ngenxa yentengo enjalo, ukulinganisa imemori ye-4 RAM (64GB MAX).
Imvamisa yememori esekelwe iphakathi kwe-2400 / 2100Mhz.
I-motherboard isekela amakhadi wegrafu kumodi ye-CROSSFIRE yokusebenza okungcono kwezokudlala.
I-motherboard isekela ubuchwepheshe bamuva be-DirectX12, kulabo abafuna ukusebenzisa ama-Microsoft / AMD ubuchwepheshe bokugcina emhlabeni weGaming.
Ingemuva yalebhodi yama-motherboard iyamangalisa, sinezici ezilandelayo:
Amaprosesa we-3 USB 3,1
Amaprosesa we-2 USB 2.0
Izikhonkwane ezingu-6 ze-Audio
- Ukukhishwa kwe-DVI-D
-1 port typeC
Okumangalisa nokumangalisa kwakuyi-TypeC yokungena, okuzobe yinto ejwayelekile Smartphones esikhathini esizayo, okuvumela ukuxhumana kwamadivayisi asebenzisa lobu buchwepheshe.
Ukuze ungakhohlwa i-cherry phezulu kwekhekhe, sine-slot M.2! Okuthile okugcinwe kuma-boardboard we-HighEND, lokhu kuzovumela abadlali abaningi ukuba bakhe ama-PC ahlanganiswe kakhulu futhi anezintambo ezimbalwa.
Futhi kulabo abazokhetha i-M.2 bayoba nesivinini esivumayo esizovumela inzuzo encane emidlalweni ngokulandelana kwedatha.
Othandayo ukuhlanganisa imibala ye-RGB, i-motherboard ine-supporter controller evumela ukuthi ulawule yonke imibala ye-RGB, uma ngabe i-Gamer ifuna ukusebenzisa i-tape ye LED ku-Case yakho ye-PC.
On the BIOS, sinalo UEFI MSI Chofoza BIOS 5, lapho singakwazi ukumisa izinto eziningi, leli imodeli akuyona ekahle Overclocking, kodwa singalethemba njalo musa underclocking yokuthuthukisa songa amandla esihamba Gaming ohlelweni lwethu, ngaleyo ndlela kulondolozwa enye kilowatts irisidi ukukhanya.
Kulabo abafuna izingxenye abiza Gaming / inzuzo kufanele ukhethe salokhu umbadlana hhayi kuphela iletha ubuchwepheshe bamuva kuya YEMIDLALO emhlabeni (M2, Crossfire, DDR4 futhi ukusekela Kabylake) kodwa futhi uletha ngokwezifiso RGB extra, konke kwenza 90 euro Izitolo eziningi eziyinhloko okudayisa (i-Amazon, PCComponentes, PCDiga).
Yingakho sithi, kuwufanele wonke ama-penny.
Izici (Imininingwane ye-MSI yokuqala):
I-MSI B250M Mortar
Umseshi i-kabylake ne-Skylake (kuze kufike ku-i7 intel)
Izitshalo ze-DDR4 4 (MAX 64GB)
Imvamisa DDR4 2100Mhz / 2400Mhz
M.2 Yebo (Okokufaka kwe-1)
Ama-Connect Connect 6
Izindawo ze-Usb ze-3.1 (zangemuva) 3
Amaports we-Usb 3.1 (Ngaphambili) 2
Izindawo ze-Usb ze-2 (zangemuva) 2
Amaports we-Usb 2 (Ngaphambili) 4
I-MotherBoard Ifomethi I-Micro-Atx
I-AMD yembula imininingwane ye-chipset ye-RYZEN
Buyekeza i-Xiaomi Smartphone Ukubukeza i-Redmi Note 5
I-OnePlus 6 I-Smartphone Review
I-Xiaomi yami ye-2S Hlanganisa i-Smartphone Review
Buyekeza ukubuyekezwa kwe-Smartphone Xiaomi Redmi 5 Plus
I-Smartphone Review Xiaomi Redmi Qaphela i-5A
Buyekeza i-Smartphone Vernee M5
I-Smartphone Review Bluboo S1
I-LeRee Le-3 I-Smartphone Review
Buyekeza i-Smartphone ye-Ulefone Armor 2
I-Smartphone Review Xiaomi Mi A1